Idatha isakazeka kumakhasimende akho njengamanje… ivela kumafoni abo, izinkundla zokuxhumana, ideskithophu yomsebenzi wabo, amaphilisi abo, ngisho nezimoto zabo. Akubambezeli. Ngisanda kuvakashela ikhaya lethu lomndeni eFlorida lapho sithuthukise khona uhlelo lwe-alamu yasekhaya.
Amakhamera axhunywe nge-DVR eku-inthanethi nangesicelo seselula engingabheka emini noma ebusuku. Ukusuka e-Indiana, ungaya endlini, futhi ngiyakubona bese ucisha i-alamu noma uvule umnyango usuka e-Indiana. Egalaji kuneFord entsha ene-Sync system, edlulisa ukuxilonga kumthengisi futhi ixhunywe kwiqoqo lomculo likaMama wami nohlu loxhumana nabo.